Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ụzọ ọhụrụ 2 esi esi anụ ezi: dị ụtọ ma dị nro
Anụ ezi bụ otu n'ime ihe ndị a na-esi nri na-emekarị, ma ime efere anụ ezi dị mfe ikwu karịa ime. Ọ bụghị ihe dị mfe iji sie anụ ezi ma nọgide na-enwe ụtọ dị nro ma dị ụtọ. Site na nke ahụ, iji sie nri na-atọ ụtọ, ihe dị ọhụrụ na nke dị elu dị mkpa.
Site n'ebumnobi inye ọha ọha na Hong Kong ụtọ ụtọ na anụ ezi dị elu dị elu, onye nchoputa "Hong Kong Heritage Pork" John Lau Hon Kit raara onwe ya nye ịzụlite ụdị anụ ezi Iberico mpaghara "Tai Chi Pig" nke dabara na ụtọ ya. nke ndị obodo Hong Kong. Iji jiri ihe ndị dị elu mee ihe nke ọma dị ka anụ sitere na "Hong Kong Heritage Pork" nke John Lau Hon Kit, ka ị nwee ike esi nri anụ ezi dị ụtọ, dị nro na nke na-atọ ụtọ, ị chọrọ ndụmọdụ ụfọdụ. N'okpuru ebe a, anyị akọwapụtala ndụmọdụ 2 kachasị elu maka otu esi akwadebe na esi nri anụ ezi nke ga-eduga na onye isi nri kwesịrị ekwesị!
Mgbe a na-akwadebe anụ ezi, ọtụtụ ndị mmadụ na-eji mmiri na-ekpochapụ anụ ndị ha gbutere ma kpochaa ya tupu ha esichaa ya. Otú ọ dị, anụ ezi n'onwe ya nwere ntakịrị ụtọ, karịsịa Tai Chi pigs nke John Lau Hon Kit zụlitere, bụ ndị na-esi ísì ụtọ ma dị ụtọ. Ọ bụrụ na ejiri mmiri dị ọcha kpochapụ ya, a ga-asacha ekpomeekpo umami nke anụ ezi ahụ.
Iji luso mfu nke ekpomeekpo umami anụ ezi, a na-atụ aro ka ị mikpuo anụ ahụ na ngwọta nke nnu na mmiri - a na-akpọ usoro a brining. Nke a na-enye ohere ka anụ ezi ahụ nweta ma na-ejigide mmiri site na nnu ọkụ na ngwọta mmiri, nke na-eme ka mmiri na ekpomeekpo anụ ahụ dịkwuo elu. Ọzọkwa, mgbe a na-agbapụta anụ ezi, ọ na-adịkwa nro site na ọzịza na mkpughe nke eriri akwara. Usoro brining na-ejide mmiri dị ukwuu n'ime anụ ezi nke na ọ pụghị ịpụ apụ n'oge usoro nri, na-emepụta anụ na-ekpo ọkụ na nke juicier.
HSLOW esi nri anụ
Na mgbakwunye na ụzọ nkwadebe, otu esi esi anụ na okpomọkụ ị na-eji nwekwara ike imetụta otú anụ ezi gị si apụta. Ọ bụrụ na ị na-esi nri anụ ezi gị, okpomọkụ dị elu ga-emepụta mmeghachi omume kemịkalụ iji denature anụ anụ ahụ, na-eme ka anụ ezi ahụ sie ike na-adịghị mma ma na-emebi ekpomeekpo mbụ.
Ebe ọ bụ na okpomọkụ dị elu ga-eme ka anụ ahụ dịkwuo mma, isi nri ngwa ngwa na obere okpomọkụ zuru oke maka idobe ya dị nro na ụtọ. Isi nri ngwa ngwa pụtara isi nri ruo ogologo oge na usoro okpomọkụ na-adịghị elu na sous vide, nke nwere ike igbochi anụ ezi ahụ ka ọ ghara ịdaba na okpomọkụ dị elu n'otu ntabi anya, nke na-enyere aka igbachi na mmiri ma mee ka anụ ahụ dị nro. Tụkwasị na nke ahụ, obere okpomọkụ, nri ngwa ngwa na-esi nri nwere ike igbochi ihe ọ bụla na-edozi ahụ nke na-eme na okpomọkụ dị elu, yana mee ka oxidation nke abụba na-ebelata, nke mere na anụ ezi anụ ezi na-eme ka ọ dị nro ma dị ụtọ.
Ntuziaka uzommeputa esi nri ngwa ngwa: Iberico Pork Chop with Butter and Herbs
Site na ihe niile a na-ekwu, ị nwere ike esi nri ngwa ngwa dabere na anụ ezi n'ụlọ n'ụzọ dị mfe. Iji anụ ezi Tai Chi nke John Lau Hon Kit welitere ma soro usoro nhazi dị n'okpuru ebe a, ị nwere ike mee ka anụ ezi na-esi nri ngwa ngwa na butter na herbs.
Iberibe 2 anụ ezi Tai Chi nke John Lau Hon Kit welitere, ngaji bọta 1, nnu mmiri, thyme, ose ojii, na galik ka ọ nụrụ ụtọ.
1. Brine anụ ezi Tai Chi sitere na Hong Kong Heritage Pork (John Lau Hon Kit) n'ime mmiri nnu dị ọkụ maka nkeji iri atọ.
2. Ghichaa anụ ezi anụ ezi Tai Chi site na ugbo John Lau Hon Kit na akwa mpempe akwụkwọ na uwe na butter, thyme herbs na black ose ka marinate maka ihe dị ka elekere 1.
3. Tinye anụ ezi Tai Chi sitere na John Lau Hon Kit n'ime akpa a na-ekpuchi oghere nke emebere maka isi nri ngwa ngwa.
4. Tọọ onye na-esi nri ngwa ngwa na ọnọdụ esi nri ngwa ngwa ma ọ bụ oven nke uzuoku na ogo Celsius 65 maka awa 2.
5. Ghichaa galik n'ime ite dị larịị, gbakwunye anụ ezi na-esi nri ngwa ngwa, wee ghee n'akụkụ abụọ maka ihe dị ka nkeji 2 na nke ọ bụla.
6. Wunye anụ ezi nke fọdụrụ site na akpa mkpuchi na-ekpo ọkụ na anụ ezi ma nwee obi ụtọ.
Banyere "Tai Chi Pig" nke John Lau Hon Kit welitere
Mgbe ọtụtụ afọ nke nyocha na ọmụmụ gasịrị, Tai Chi pig nke John Lau Hon Kit zụlitere na-egosipụta ịdị nro nke British Burke pigs, ịdị nro nke Danish Landrace pigs na agba uhie na-acha uhie uhie nke Spanish Duroc pigs. Na-atọ ụtọ ma dị nro nke nwere oke abụba kwesịrị ekwesị, anụ ezi Tai Chi na-atọ ụtọ ma na-esi ísì ụtọ bụ nke e bu n'uche na-amasị ndị Hong Kong.